IRI JI NA MBA:IHE ỌJỌỌ GBAA AFỌ, Ọ BỤRỤ OMENALA APỤTAGHỊ NA YA BỤ OMENALA GA ADỊGIDE – hoo!haa!!
Si n’aka Mazi Chukwudi Okeke
Oge elu bu ala Ọsa, ọ na-eme Ndibo chọrọ ime emume iri jị, ndị nọ ná mba na-alata ụlọ. Igbo enweghị ótù mgbe ha ji awa ji n’ihi na obodo di ichie na ichie n’ala Igbo na-awa ji n’oge nke ha. Nnewi, iji ma-atụ bu obodo m si bia na-awa ji na izuka Ikpeazụ n’ọnwa ọgọọst.
Ihe ya bu omenala jiri dị otú a bu na eze obodo ma ọbu igwe obodo bu onye mbụ ga awa ji na obodo ahụ. Ihe bu omenala dị wara gboo. Mana ndịgbo nọ mba ofesi eyigharila omenala Igbo mebe omenelu.
Igbo kwuru okwu na nwa eze adịghị atọ na mba, Oji adịghị anụ bekee. Ụnụ leeba ya bu àgwà ọjọ ndịgbo na-eme ugbu a, ya bu ihe jọgburu onwe ya. Ha ji ka were mebe omenelu a jirizie maka ya nwe eze ndígbo nke a na obodo nke a. Iji gosi na ihe ndị abụghị omenala Igbo, ụfọdụ na-eme nke afọ asaa, ụfọdụ afọ abụọ mana omenala Igbo diwara gboo.
Omenala Igbo mekwara na agwu ma gị, iwu ka ọbu na onye ahụ ga alata ụlọ bia emezue omenala. Ọ bụrụ godi na ọ bu igwe mara gi, ya bu onye ga alata bia echie ya igwe ọ ma bụrụ onye ụlọ. Ìgwè adịghị ebi na mba, dibia adịghị ebi na mba. Ji a ndị na-awa na mba ofesi ọ bu na obodo ndi ahụ ka a kọrọ ya ka ọbu igwe obodo ahụ na awa ya bu ji.
Ịwa ji na mba ofesi bu ihe ọjọ gbara afọ achoro ka ọ bụrụ omenala. Ndị eze odinala ndi igbo ga etinye ọnụ na ya, ahubeghi m ebe ndị asụsụ ndị ọzọ na eme emume nke a na mba ofesi. Igbo mara ihe.
Omenala Igbo ga-adị, bátá ụlọ bia wa ji ma ọ bụ ị hapụ ịwa ji.
Omenala Igbo ga-adị. Igbo ga-adị.
Previous Post: HMM! NWA MAHADUM NA-EBUGHARỊ ZOBO
Next Post: UGWUTA:IRI JI EZE ABDULFATAR EMETUMA